BlackBerry KEYone doziri nsogbu ihuenyo na ndekọ ndekọ oge Gam akporosis
BlackBerry KEYone doziri nsogbu ihuenyo na oge ndekọ
Blackberry bụ otu n’ime ndị na - arụpụta ekwentị mkpanaaka ahụ, mgbe ha nọsịrị elu, adaala ma tufuo ya n ’ahịa fọrọ afọ, ka na - achọ ụzọ ha. Agbanyeghị, ọ gara n'ihu ime ka o doo anya na ọ bụ "nnukwu ụlọ ọrụ" na ya gosipụtara na ọ nwere ike ịchọpụta ma dozie nsogbu ọsọ ọsọ na n'ụzọ dị irè.
Izu ole na ole gara aga, BlackBerry KEYone ngwaọrụ malitere ịnata nyocha ndị na-adịghị mma mgbe vidiyo sitere na JerryRigEverything tinyere ọnụ ya site na ule ntachi obi. Na ule a, ihuenyo KEYone apụtaghị nke ọma na ọ bụ na, mgbe ọ gbusịrị ọdịda, o doro anya na ihe nrapado n'azụ ihuenyo abụghị nke kacha mma.
Nzaghachi BlackBerry nwere ngwa ngwa. Companylọ ọrụ ahụ, yana TLC, chere na ikpe ahụ, ọ bụ ezie na ha kwukwara na ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ ole na ole nke ndị nwe Blackberry KEYone na-enwe nsogbu ngosi n'oge ahụ. N'otu oge ahụ, BlackBerry gosipụtara na ha na-arụ ọrụ ugbu a n'ịchọta ihe ngwọta, ọkachasị mmejuputa mgbakwunye ndị ọzọ ga-edozi ihuenyo ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Nke a bụ vidiyo nke gosipụtara adịghị ike nke ndozi nke ihuenyo nke BlackBerry KEYone:
Ugbu a, ọrụ ahụ ahụla nsonaazụ na BlackBerry ewepụtala nkwupụta gọọmentị na ọgbakọ CrackBerry na-eme ka ndị ọrụ niile nke ngwaọrụ a mara na ha adịlarị "Emebere ihe ndị ọzọ" nke na-enye nkwụsi ike na mmezi dị ukwuu na ihuenyo nke BlackBerry KEYone. Ngalaba KEYone ọhụrụ a nwere nrapado siri ike ma na-eguzogide ọgwụ amalitelarị iru ndị na-ere ahịa na ndị ọrụ ekwentị, ga-aga n'ihu na-abawanye ngwaahịa ha n'oge ọkọchị.
Ozi zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ gụrụ dị ka ndị a: “N’ịgba mbọ iji hụ na ndị ahịa anyị niile na BlackBerry Mobile na ndị otu anyị nwere ọpụrụiche pụrụ iche, anyị na-emejuputa atumatu ndi ozo na-agbakwunye ike na nrapado na ihuenyo BlackBerry KEYONE. A na-agbanye usoro ọhụrụ ndị a na KEYones ọhụrụ ma na-amalite na-emetụta ngwaahịa na ire ere anyị - ga-aga n'ihu na-abanye na ngwaahịa n'oge ọkọchị niile. Ọ bụrụ n’ịzụrụrịrị BlackBerry KEYONE, ị bụ n'ụzọ zuru ezu kpuchie anyị emeputa akwụkwọ ikikeYabụ ọ bụrụ na nsogbu dapụta, biko kpọtụrụ anyị ma anyị nwere ike ịnyere gị aka ịgbanwe akwụkwọ ikike ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. "
Ọ bụghị ihe ọhụrụ maka ndị nrụpụta iji rụọ ọrụ na nsogbu ngwaike n'ụzọ dị otu a ngwa ngwa ma dịkwa ọfụma, nke bụ, n'enweghị obi abụọ, nnukwu ọnọdụ na-akwado BlackBerry na TLC
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » BlackBerry KEYone doziri nsogbu ihuenyo na oge ndekọ
Enwere ike igosi Xiaomi Mi6s na July 11
Ngwa kacha mma maka Philips Hue